Football Khabar » बार्सिलोनाको ‘मुड चेन्ज’ : अब कुनै पनि मूल्यमा कोउटिन्हो नबेच्ने !
बार्सिलोनाको ‘मुड चेन्ज’ : अब कुनै पनि मूल्यमा कोउटिन्हो नबेच्ने !
सिजन २०१८÷१९ मा खराब प्रदर्शन गरेर आलोचित बनेका तथा क्लबको बिक्री सूचीमा रहेका ब्राजिलियन खेलाडी फिलिपे कोउटिन्होलाई स्पेनिस बार्सिलोनाले तत्कालै नबेच्ने भएको छ । यसै समरमा बार्सिलोनाले ब्राजिलियन खेलाडीलाई स्पेनबाट बिदा गर्ने चर्को चर्चा चले पनि अहिले आएर बार्सिलोनाले आफ्नो तयारीबाट पछि हटेको हो । यो कुरा कोउटिन्होका एजेन्ट स्वयंले पुष्टि गरेका छन् ।
२७ वर्षीय कोउटिन्हो बार्सिलोनाको इतिहासकै सबैभन्दा महँगा खरिद खेलाडी हुन् । अघिल्लो जनवरीमा उनी इंग्लिस क्लब लिभरपुलबाट बार्सिलोना पुगेका थिए । उनलाई बार्सिलोनाले १६० मिलियन युरोमा अनुबन्ध गरेको थियो । क्लबका महँगा खेलाडी भए पनि उनको कमजोर प्रदर्शनबाट क्लब खुसी हुन सकेको थिए । जसका कारण बार्सिलोनाले उनलाई बेच्ने वा अन्य खेलाडी भित्र्याउने डिलमा मिसाउने तयारी गरेको चर्चा थियो ।
पछिल्लो समय बार्सिलोनाले पूर्वखेलाडी नेइमारलाई फ्रेन्च क्लब पिएसजीबाट फिर्ता ल्याउन कोउटिन्हो दिएर केही रकम थप्ने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेका बेला कोउटिन्होका एजेन्ट किया जोर्बाचिनले कोउटिन्हो पिएसजी जानसक्ने कुरालाई नकारेका छन् । उनले बार्सिलोनाका अधिकारीसँग हालै मात्र आफूले बैठक गरेको बताउँदै ब्राजिलियन खेलाडी आगामी सिजन पनि बार्सिलोनामै रहने पुष्टि गरे ।
‘केही दिनअघि मात्रै मैले बार्सिलोनाका फुटबल निर्देशक पेप सेगुरासँग बार्सिलोनामा बैठक गरे । त्यसक्रममा उनले मलाई क्लबले कोउटिन्होलाई यो समरमा नबेचने प्रष्ट पारे,’ एजेन्टले भने, ‘मूल्य कमी वा बढी विषय होइन । बार्सिलोनाले यो सिजन कुनै पनि मूल्यमा कोउटिन्हो बेच्दैन ।’
गत सिजन कोउटिन्होले बार्सिलोनाका लागि सबैखाले प्रतियोगिताबाट कूल ५३ खेल खेल्दै ११ गोल गरेका थिए भने २ गोलका लागि असिस्ट गरेका थिए । सो सिजन बार्सिलोनाले मात्रै घरेलु लिग ला लिगा जित्दा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र कोपा डेल रेबाट आउट भएको थियो ।
प्रकाशित मिति १९ असार २०७६, बिहीबार ०९:१९